Thwebula AOMEI Backupper 4.0.2 Standard... – Vessoft
Akwazi ukugcina, Amafayela
Thwebula AOMEI Backupper
AOMEI Backupper – isofthiwe isipele futhi ubuyisele idatha. Isofthiwe kungaba isipele a disk noma ngodonga ngalinye kanye nesimiso esisebenza ngokungaguquguquki njengomthetho izicelo ezifakiwe, wonke amafayela system kanye nezilungiselelo. AOMEI Backupper ikuvumela ukuba Clone disk, ngokukhetha ukubuyisela idatha ezidingekayo bese udala disk oqalisekayo noma flash drive. Isofthiwe uyakwazi ukukhweza isithombe esikhethiwe ngesimo disk virtual. AOMEI Backupper isekela isipele of the izindilinga eziyizicaba yangaphakathi, wangaphandle hard ngemoto, flash oshayelayo namanye amadivayisi isitoreji idatha exhunywe kwi-computer.
Backup uhlelo lokusebenza kanye ezilengayo
Lokubuyisela of the system, angaphandle kanye amafayela akhethiwe
Indalo of the izindilinga eziyizicaba oqalisekayo
Ukubethela futhi zlib of ibhekhaphu
Amazwana on AOMEI Backupper:
AOMEI Backupper Ahlobene software: